Vateveri vemutambo wenhabvu munyika vane mafungiro akasiyana-siyana zvichitevera basa rakapihwa Joey Antipas rekuti arairidze chikwata chema Warriors.
Vamwewo vanoti Antipas haasi kuzokwanisa kuisa pfungwa dzake dzese pabasa remaWarriors sezvo aine chimwe chinangwa chekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nechikwata chake cheChicken Inn.
Asi muongorori wemutambo wenhabvu ane mukurumbira, VaFarai Kambamura, vanoti hapana mumwe murairidzi muZimbabwe anokwansa kuita basa iri zvinodakadza kudarika Antipas.
Antipas achange aine vatevedzeri vaviri, Lloyd Chitembwe weHarare City, naTonderai Ndiraya weDynamos.
Mumwe muteveri weDynamos, VaSamson Masiyazi, vanoti vane nhoroondo yakasimba yebudiriro munhabvu munyika
Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association, VaWilliam Mahoko, vanoti muZimbabwe hamusisina murairdzi anokwanisa kusimudza chikwata ichi vachiti ivo veZifa vaifanira kutarisa kunze kwenyika kana kutsvaga Grobbelaar uyo ane ruzivo rwakasimba rwenhabvu yepamusoro-soro.
Aimbotambira chikwata cheKadoma United muZifa Northern Region Division One, VaPaul ‘Joulo’ Tandi, vanoti semaonerao avo pane murairidzi mumwechete chete munyika aikodzera kutsiva Chidzambwa, murairidzi wacho ari Norman Mapeza.
Asi mutsigiri wechikwata cheHarare City, VaWashington Changata, vanoti Antipas nevatevedzeri vake Chitembwe na Ndiraya, vanokodzera nokuti ruzivo rwavanarwo rwunokwanisa kuti maWarriors akunde mumitambo yavakatarisana nayo.
Asi VaMasiyazi havasi kugutsikana nevatevedzeri VaAntipas kunyanya Ndiraya uyo vanoti haasati awana nguva mumutambo uyu yekukwanisa kurairidza chikwata chakakura semaWarriors.
MaWarriors achangobva kudzoka kubva kumakundano e 2019 Africa Cup of Nations KuEgypt uko vakanonyadzisa nekubuda munharaunda yekutanga nepoindi imwechete chete kubva mumitambo mitatu.
Asi Va Changata vanoti kunyange hazvo Antipas, Chitembwe naNdiraya vane zvikwata zvavo, vakabatana, maWarriors anobudirira muhondo yavo ye2021 Africa Cup of Nations ne 2022 World Cup.
Antipas Pachake anoti achaita nepese paanogona kuti Zimbabwe iremekedzwe zvekare munhabvu muAfrica achiti achasarudza vatambi kwete nezita asi nematambiro avanenge vachiita panguva iyoyo.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia mumakwikwi e2021 Africa Cup of Nations uyezve iri kusangana neSomalia mumakwikwi e 2022 World Cup mwedzi unotevera.
Zimbabwe haina kutamba muakundano 2018 World Cup mushure mekudzingwa mumakwikwi aya neFifa nemhaka yekutadza kubhadhara aimbove murairidzi wayo Valinhos sekubvumirana kwavaive vaita.